အီတလီချက်ပြုတ်နည်းနှင့်အတူအီတလီအစားအသောက်ဘလော့ | Vincenzo ရဲ့ပြား
အီတလီ Antipasto ချက်ပြုတ်နည်း
အီတလီသုပ် & side
အီတလီ Tours မှ
အီတလီနိုင်ငံ Vincenzo ရဲ့ပြားအတွက်ကွတ်
Vincenzo ရဲ့ပြား Store က
ငါ၏အအီတလီ Tours မှ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်
Subscribe / Connect ကို
Vincenzo ရဲ့ပြား YouTube ကို Channel ကို Subscribe
Vincenzo ရဲ့ပြားဆုံးဖြတ်သည်, အီတလီအစားအသောက်ချက်ပြုတ်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနဲ့ YouTube ကိုဟင်းချက် Channel ကိုဖြစ်ပါတယ်
ပါးစပ်-ရေလောင်းနှင့်အတူမိသားစုနှင့်သင်ကိုယ်တိုင် အီတလီချက်ပြုတ်နည်းများ လက်ျာဘက်တစ်ဦးရယ်ရှိခြင်းနေတုန်း, သင့်သည်အလွန်ကိုယ်ပိုင်မီးဖိုချောင်ထဲက (နှင့် vino တစ်ဖန်!) ။
အီတလီမှာအီတလီ Tours မှ
ဆစ်ဒနီရှိဟင်းချက် Classes ရဲ့
Neapolitan ပီဇာမုန့်စိမ်းဒါဟာ Neapolitan အဘိဓါန်ပီဇာမုန့်စိမ်း calzone, ပီဇာအခြေစိုက်စခန်းများအောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ...
LIMONCELLO ဝဠာထဲမှာအကျော်ကြားဆုံးအီတလီ liqueurs တစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးပါဝင်ပစ္စည်းများစေ ...
ARANCINI ချက်ပြုတ်နည်းများ | အိမ်လုပ်အီတလီဆန်
Arancini ragu, ပဲစေ့တွေဟာ mozzarella နှင့်နက်ရှိုင်းသောကြော်နှင့်ပြည့်စုံကျပ်ဆန်ဘောလုံး Delicious ဆူဖြိုးနေကြသည် ....
Cook ကအချိန်: 40 အောင်မင်း
ဟင်းနုနွယ်ရွက် Ricotta Pie
ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် Ricotta Pie | ဤသည် savory ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် ricotta ပိုင်ပျော့ ricotta ဒိန်ခဲပေါင်းဘော်ရောနှော ...
Cook ကအချိန်: 60 အောင်မင်း
Nonna Igea ဖွငျ့ Lasagna ကြော်
Lasagna ကြော်အီတလီ။ အဘယ်သူမျှမအတော်လေး Nonna လိုပါဘူး။ ဤသည်ရှေးဟောင်း lasagna စာရွက်ဖြစ်ပါတယ် ...
Cook ကအချိန်: 15 အောင်မင်း
ပင်လယ်စာခေါက်ဆွဲ | ပင်လယ်စာအီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံ Carbonara
flavoursome ပင်လယ်စာအပြည့်အဝပင်လယ်စာခေါက်ဆွဲစာရွက်ပဲသင်၏နှုတ်၌အရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအ ...
Cook ကအချိန်:4အောင်မင်း
Nutella ပီဇာကြော် | ဘယ်လို
Nutella ပီဇာကြော် | Nutella နဲ့ Banana ပီဇာ Make လုပ်နည်းဒါကမဖြောင့် ...
Campari Prosecco ကော့တေး
အီတလီဂန္, အ Campari Prosecco ကော့တေးအနည်းငယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည် ...
Cook ကအချိန်: 30 အောင်မင်း
ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် Ricotta Cannelloni ကြော် |
ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် Ricotta Cannelloni ကြော် | လတ်ဆတ်တဲ့ crepes နှင့်ဖွဲ့ Nonna ရဲ့ကြော် Cannelloni တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးနေကြသည် ...
အီတလီငါးဟင်းချို - Zuppa di
ကုလားပဲနှင့်အတူအီတလီငါးဟင်းချိုတစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့်တစ်ဦး flavoursome ပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ် ...
ပင်လယ်စာ parmigiana ။ သင်ပထမဦးဆုံးကဒီမှာသည်ကြား! တစ်ဦး Delicious ရဲရင့် parmigiana အပေါင်းတို့သည်ဖြစ်စေလျက်, ...
BUTTERNUT squash ဟင်းချို
Butternut squash ဟင်းချိုတစ်ဦးကြိုးဖွစျထှနျး, အရသာမုန့်ညက်ဖြစ်ပြီး, အသီးအသီးတို့မိသားစုကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းရှိပါတယ် ...
Cook ကအချိန်: 10 အောင်မင်း
စတော်ဘယ်ရီ CHEESECAKE NO မုန့်ဖုတ်
စတော်ဘယ်ရီ CHEESECAKE NO မုန့်ဖုတ်သင်ကဒီအရသာမမုန့်ဖုတ်အချိုပွဲခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်! ဒါဟာအလင်းရဲ့အ ...
ခေါက်ဆွဲ all'Arrabbiata ခေါ် ARRABBIATA ခေါက်ဆွဲငံပြာရည်
Arrabbiata ခေါက်ဆွဲငံပြာရည်လတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုစပ်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောစာရွက်ဖြစ်ပါတယ် ...
pesto နှင့်အတူဒိန်ခဲပွေီးမှလူတိုင်းကိုချစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းမြတ်ခြင်း၏ crunchy တုတ်ဖြစ်ကြသည်။ ပင်စိမ်းနှင့်အတူ ...
Struffoli နက်ရှိုင်းတဲ့ zesty နှင့်အတူအစဉ်အလာတောင်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံကနေစစ်မှန်အီတလီပျားရည်ဘောလုံးကြော်နေကြသည် ...
Cook ကအချိန်: 20 အောင်မင်း
အီတလီ meatballs - ထူးခြားသောကြော်
အီတလီ meatballs ညာဘက်ကျောအထူးအချိန်ရန်သင့်အားယူပြီး, အဆုံးစွန်နှစ်သိမ့်အစားအစာများမှာ ...
spaghetti VONGOLE သခင်အားဖြင့်ချက်ပြုတ်
spaghetti Vongole ။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ spaghetti နှင့်အတူတစ်ပန်းကန်ပေါ်တွင်ပင်လယ်၏အရသာမြည်းစမ်း ...
သတ်သတ်လွတ် LASAGNA | လွယ်ကူသောဟင်းသီးဟင်းရွက် Lasagna
သတ်သတ်လွတ် lasagna ရိုးရာအသားဖြည့်ဗားရှင်းအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်နေဆဲယို-ထုပ်ပိုးရဲ့ ...
POLENTA ချက်ပြုတ်နည်းများ Abruzzo STYLE
Polenta ကြော်တစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ, ဂန္မြောက်ပိုင်းအီတလီဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ polenta, ငါ့ Nonna ရဲ့ဗားရှင်းက ...
Cook ကအချိန်:5အောင်မင်း
အီတလီ OMELETTE FRITTATA
ဤသည်အီတလီ omelette ပကတိဂန္ပါ! သငျသညျ, ကြက်ဥ, parmesan နဲ့ parsley နှင့်အတူနိုင်ပါတယ်လုပ် ...
အကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးအီတလီ Antipasto, သုပ်နှင့် Side ချက်ပြုတ်နည်း
Mouthwatering နှင့်လွယ်ကူစွာအီတလီခေါက်ဆွဲနှင့် risotto ချက်ပြုတ်နည်း
Vincenzo ရဲ့ပြားဘလော့ မှစ. နောက်ဆုံးပေါ်
အစားအစာရန်ပွဲ (က Short ဟာသ Skit)
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2018
ငါ၏အယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်အစားအစာရန်ပွဲ (က Short ဟာသ Skit), နှင့်ကိုယ့်ကို run စီးပွားရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကအားလုံးကိုထူးချွန်ထုတ်ကုန်ရတဲ့အကြောင်းကိုပါပဲ။ အဲဒီမှာအရည်အသွေးကိုမယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရွှေဖြူစုဆောင်းအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ...
အကျော်ကြားဆုံး VINCENZO'S ပန်းကန် youtube video'S
ပီဇာ & ပေါင်မုန်
သုပ် & side
2019 Vincenzo ရဲ့ပြား©။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
Vincenzo ရဲ့ Store က